I-UK: Ngaba unokhuseleko olukhuselekileyo lwamehlo, iapiloni zeplastiki okanye iiglavu ezilahlayo? - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaI-UK: Ngaba unokhuseleko olukhuselekileyo lwamehlo, iapiloni zeplastiki okanye iiglavu ezilahlayo?
I-UK: Ngaba unokhuseleko olukhuselekileyo lwamehlo, iapiloni zeplastiki okanye iiglavu ezilahlayo?
Uninzi lwabafundi bethu basebenza, banabo okanye bayasebenza kwiindawo zokuvelisa ezinokuba nesitokhwe esisele.
Ukuba ucinga ukuba unganceda, qwalasela ukuqhakamshelana nesebe leenkonzo zononophelo lwasekhaya okanye iinkqubo zokuziphatha ze-GP
Nceda ungavuleli nakuphi na umnyango ongavulelwanga.
Musa ukoyika, Zombane ngeveki ayitsibatsi kwi-band ye-covid-19. Esi sikhalazo sisekwe kwizicelo ezizolileyo zelinye lebhunga kule mpelaveki-ndixelelwe nje ukuba ibhunga laseGreenwich lithethe into efanayo kwirediyo yesizwe ngale ntsasa.
Ezinye ii-GPs zifuna ukhuseleko lobuso. Abo banoshicilelo lwe-3D (kunye nefilm ye-PETg okanye ye-ABS), okanye isibonisi seplastiki esibonakalayo kunye nokukwazi ukusisika, bangakwazi ukufezekisa le mfuno ngokwenza isihlangu sobuso inkampani Printa 3d eyenze kakuhle kwaye ivume ngokwamayeza (ifanekis) .